> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka tirtiraa HTC Hero
Soo Celinta fariimaha tirtiray on Hero HTC ah?
Waxaan leeyahay Hero HTC ah ordaya Android 2.1. Sidaas waxaa la ii soo reynaya xogta ka Codsiyada aan Maamul ee Settings, iyo si ula kac ah iska indho wax fariin ah, si looga hortago in iyaga la tirtiray. Waa hagaag, Waxaa si dhab ah uma tago waxa aan u maleeyey. Anigu ma heli karo fariimaha qoraalka ah oo dhan hadda. Waxaan heystaa waxay billaabeen, laakiin waxba ka caawiyay. Ma ahan in aan gurmad kasta. Sidaas, waxaan lumin doonaa fariimo aan weligiis? Taasi waa muhiim ii, oo aan runtii ma doonayo in aan guuldaro. Fadlan i soo caawisaa haddii aad qabto talo kasta oo wanaagsan. Thanks.
Xaaladdan oo kale, waxaa laga yaabaa in aad ka bariyeelay maylka adag ee ku saabsan app app text ama nidaam ka hadlaya farriimo ku saabsan telefoonka, si ay u soo maray. Haddii aad ugama dhigin gurmad wax ka hor, waxaa jira jid ay u celinaynaa, sababta oo ah ma jiro bin recycle ah ama qashin ah ee aad taleefan, midkood. Laakiin ma ahan isagoo leh in aad tahay dhamaadka meyd ah. Weli waxaad leedahay fursad aad u isticmaali karto qalab kabashada dhinac saddexaad si ay baarista telefoonka. Farriimaha la tirtiro ay u tageen oo keliya marka ay overwritten by xog cusub. Sidaas darteed, wax waa in aad marka hore ku riday waa ilaalinta telefoonka loo isticmaalo iyo sida loo helo HTC Hero qalab kabashada fariin dib u soo ceshano Farriinta tirtiray sida ugu dhaqsaha badan.
Marka ay timaado in qalabka HTC kabashada SMS, waxaa jira talo fiican, Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) , taas oo lagu kalsoonaan karo oo wax ku ool ah. Barnaamijkan waxa software kabashada xogta ee adduunka ee ugu horeeyay ee Android aad u isticmaali karto inuu ka soo kabsado fariimaha iyo xiriirada ka qalabka Android ugu, sida telefoonada iyo kiniiniyada ka HTC, Samsung, LG, Motorola, Sony, Google, iwm Waxaad isku dayi kartaa waxa hadda.
Si aan ku bilaabo, rakibi Wondershare Dr.Fone for Android on your computer ka dib markii aad ka soo dejisan waxaa. Marka uu dhameystiray, waa inaad ku labanlaabtaa karaa guji icon barnaamijka ayaa si ay u maamulaan. Markaas waxaad heli doontaa suuqa kala muuqashada on your computer.
Tallaabada 2. Isku aad telefoon oo iskaan
Si loo hubiyo in xiriir guul, hubi telefoonka iyo in la hubiyo in ay horay hab debugging USB. Haddii aan, aad waa in hadda dhigay. Halkan waa jidka noo jooga,
* Tubada Settings on qalab aad.
* Raadi fursado Developer oo guji si aad u furto.
* Baar debugging USB si ay u gudato.
Marka aad dhamayso, ku xidhi aad telefoonka kula cable USB ah. Marka Wondershare Dr.Fone for Android aqoonsan qalab aad, waxa kuu sheegi doonaa in ay diyaar u tahay in baarista phone sida uu furmo suuqa hoose oo muujinaya.
Waqtigaas, haddii batari ku saabsan telefoonka waa in ka badan 20% eedeeyay, aad si toos ah u riixi kartaa batoonka Start ah in ay ku talaabsato. Haddii batteriga oo aan ku amray oo ku filan, waxaad u baahan tahay inaad marka hore ka qaadaan, ffor baaritaan lagu guulaystay.
Tallaabada 3. Ladnaansho fariimaha ku Hero HTC aad
Scan ayaa noqon doona in yar oo wakhti dheer qaata. Markii uu dhamaystay, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waxaa gaaray baxay fariimaha aad rabto in aad ka mid ah dhammaan waxyaabaha recoverable ceshan iyaga. Hadda, dooran fariimaha dhinaca bidix ee suuqa si ay u eegis iyo go'aan aad rabto. Markaas riix Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer. Waa shaqo hal-click ah.
Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) ayaa sidoo kale ogolaan kartaa in aad ku eegaan ceshan xogta kale, loo dhan yahay ee xiriirada, sawiro, dokumentiyo, iwm waxa Download oo tijaabino hadda!